I-Ultrasonic Ballast Water Disinfection - I-Hielscher Ultrasound Technology
Uhlelo lwezokwelapha lwe-ultrasonic lubonise ukuthi lusebenza kahle ekubulaweni kwama-bacteria, iplanki, nezinhlobo ezinkulu.
Ukucwiliswa kwe-ultrasonic yamanzi e-ballast yindlela yokwelapha / ukuphathwa ngokomzimba, okugwema ukulingana kwanoma yimaphi amakhemikhali asebenzayo futhi abizayo emanzini e-ballast. Lokhu kuqinisekisa ukwamukeleka okuhle kwemvelo kuhlangene nokusebenza okuphezulu kwezinto eziphilayo ngokuphathelene nokubhujiswa kanye nokungasebenzi kwezitshalo nezilwane nezilwane ezincane emanzini e-ballast.
“Uma umkhumbi uhamba ngaphandle kwempahla noma ulayishwe kancane kancane, kuzodingeka ukuba i-ballast igcine ukuzinza nokuphepha kwayo. Amanzi ngokuvamile asetshenziswa njengama-ballast, kepha uma eqoqwe ekusungulweni, uchungechunge lwezinto eziphilayo lungangena emanzini, ngokuvamile amalungu omphakathi we-plankton angakwazi ukungazifiki lapho uya khona (allochthonous), futhi angabangela ukungcola okungafuneki kwe-biogological . Ukuze sigweme lokhu kungcola okungenzeka, kufanele sisebenzise uhlelo olusebenzayo ukuze sibilise amanzi e-ballast.” [Mingorance Rodríguez: 2012, 163]
Izinhlobo eziphilayo zasemanzini zingesinye sezinsongo ezine ezinkulu kunazo zonke olwandle, futhi zingabangela imithelela yezemvelo, ezomnotho nezempilo kakhulu. Ukuze ugweme ukufakwa kwezinambuzane ze-insecticide (i-zebra mussels, i-clam yase-Asia, nabanye), izindlela zokwelapha ezihlukahlukene ze-ballast amanzi inzalo (okubizwa nangokuthi i-disinfection noma neutralization) ingasetshenziswa. Ukwelashwa okuvamile ukuhlanzwa kwamakhemikhali ngamanzi e-ballast. Amakhemikhali asetshenziselwa ukulimaza kwemvelo nokubiza. Ngezimiso zomthetho ezandayo zokuphathwa kwamanzi e-ballast, ezinye izindlela zokwelashwa kwamanzi e-ballast – isb by disinfection ultrasonic – zihlanganiswe ebhodini lezikebhe zasolwandle.
Inzalo ye-Ultrasonic ye-Ballast Water
Ukwelashwa kwamanzi e-ultrasonic ballast yindlela yokusebenza / engokwenyama, evimbela ukusetshenziswa kwamakhemikhali ayingozi nakabizayo. Amandla amakhulu okubulala abulale ama-micro aquin organisms nama microorganisms. Ucwaningo oluthile luye lwafakazela ukuthi i-ultrasound izuza izinga eliphakeme lokusebenza kahle kwezinto eziphilayo kuZebra mussel veliger, nematodes, amabhaktheriya, kanye namagciwane.
I-Ultrasonic Cluster namandla angu-120kW enqubo
Ultrasonic Disinfection nge-Cavitation
Amagagasi amakhulu aphezulu angama-ultrasound enza cavitation ama-bubble ku-ketshezi, okuholela emandleni amakhulu e-shear nokucindezelwa okukhulu. Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasound ehlanganiswa abe uketshezi, amaza omsindo asakazeka emithonjeni ye-liquid aholela ekushintshaneni kwemijikelezo ephezulu kakhulu neyomfutho ophansi, ngamanani ngokuya ngemvamisa. Ngesikhathi sokujikeleza kwengcindezi ephansi (isigaba se-rarefaction), amaza aphezulu we-ultrasonic aqinile akha ama-bubu amancane okugcwala noma i-voids ku-ketshezi. Lapho ama-bubble ethola ivolumu lapho engasakwazi ukudonsa khona amandla, ehla ngokudabukisayo ngesikhathi somjikelezo we-high-pressure (isigaba sokucindezela). Lo mkhuba kuthiwa cavitation. Phakathi nokushisa okuphezulu kakhulu (cishe 5,000K) kanye nezingcindezi (cishe 2,000atm) kufinyelelwe endaweni yangakini. I-implosion ye-bubble cavitation nayo ibangele ama-jets ahlanzekile angama-280m / s velocity.
Lesi sizukulwane esinamandla kakhulu se-bubble futhi siwehla imiphumela emithonjeni ye-hydrodynamic shear kanye ne-ultrasonic oscillations, ephula futhi ephazamise izindonga zeseli zezinto eziphilayo – ababulala ngokuphumelelayo.
Ngokuphathelene nokwamukelwa kwayo kwemvelo, azikho ukukhathazeka kwemvelo okuwaziwayo noma okulindelekile okuhambisana nobuchwepheshe obusekelwe yi-ultrasound.
Ukusebenza Okuphilayo Kwe-Ultrasound
Ucwaningo oluningi luye lwafakazela ukuthi i-ultrasound ingathinta amagciwane namagciwane ngokuphumelelayo. Ucwaningo lwe-disinfection ngamadivaysi e-ultrasonic ukuze inzalo imifudlana yevolumu ye-100 gpm (amalitha ngomzuzu), afana namamitha angu-23 / h, abonise ukunciphisa ukungena kwe-log kwe-7 i-polio virus (< I-5μm) kanye nokwehliswa kwamalogi okuyi-6-7 kwamagciwane Cryptosporidium parvum. Ne Nematode I-Heliminth ova, Ascaris (8-10μm) ne-mollusk zebra mussel veligers (70μm), ukufa kwe-100% kwafinyelelwa. Isilinganiso esifanayo sokufa nge i-zebra mussel kuboniswe ku-600 gpm flow systems (Buchholz et al., 1998).
Izinga lokungasebenzi loku-100% liye lafinyelelwa ezinhlotsheni ezinkulu kanye nokunciphisa ukungena kwamagciwane angu-6-7 kuma-bacterium kanye namagciwane. Ngama-exposure angu-20 ohlelweni lokugeleza oluqhubekayo lokuhlola, ukusebenza kuka-93-98.6% Cryptosporidium ocyst kanye nokunciphisa okungenani kwelogi ku-10 sec. ukutholakala kwesikhala se-laboratory batch reactor kuye kwafinyelelwa. Izinga lokungasebenzi libuye labikwa Cryptosporidium parvum (Log 7), ikwazi ukusebenza amaqanda ase-helminth (4.2 log), i-polio virus (8 log), I-Salmonella sp. (9 log) futhi I-Echerichia coli (Log 9) (Oemcke, 1999; Buchholz et al., 1998).
Inombolo yelogi imelela inani lama-9 ekunciphiseni amaphesenti. Isibonelo, ukuncishiswa kwelogi okungama-2 kusho ukuthi amaphesenti angu-99 wezinto eziphilayo ezisekuqaleni emanzini azange asebenze. Ukuncishiswa kwelogi okungama-3 kusho ukuthi 99.9% ayilungisiwe, njll.
Umthamo wezinhlelo ze-ultrasonic ubuxhomeke ekutheni amandla akhululwe. Amandla aphezulu / ama-high ultrasonic amadivaysi adinga isikhathi esincane sokwehliswa kokufa ukuze kwenzeke ngaleyo ndlela kuvumela izinga eliphezulu lokugeleza okumele lilashwe. Izinhlelo ezinjalo ze-ultrasonic zingasetshenziselwa ukuhlaziywa nokuhleleka.
(cp. Sassi no-2005, ikhasi 49)
Izinzuzo ze-Ultrasonic Ballast Water Neutralization
ephumelelayo futhi ephumelelayo
enamandla futhi enokwethenjelwa
ikwazi ukukala kunoma yisiphi isayizi
I-Hielscher iyingcweti ekuklanyeni nasekukhiqizeni imishini yamandla aphezulu e-ultrasonic ebangeni lezimboni ekufakweni ezindaweni ezidinga. Uthuli & ukungcola, umswakama ophezulu kanye nezimo ezinzima akulimazi i-ultrasonicators yezimboni (uchungechunge lwe-UIP). Lezo zinto zokusebenza ezisindayo zakhiwa ukusebenza okuphakade (24h / 7d). Amakhabhinethi afika ngaphambili futhi alula ukufaka nokuqala-up. I-ultrasonic system kumele ixhunywe kuphayiphi yokuphakelayo kusukela ku-ballast amanzi tank (ukunikezwa kwezindaba) kanye nokunikezwa kwamandla.
Ubukhulu obuhlukahlukene bamadivaysi e-ultrasonic ngamandla we-ultrasound of 500W, 1kW, 1.5kW, 2kW, 4kW, 10kW futhi 16kW, okungafakwa njengeyunithi eyodwa noma njengeqoqo, vumela ukulungiswa okuhle nokucubungula.
Khuluma nathi mayelana nevolumu yakho yokucubungula! Sizojabula ukukuncoma uhlelo olufanele lwe-ultrasonic lwenqubo yakho yezinqubo.
Ama-Synergies namanye ama-Treatment Water Treatments
Ucwaningo lwezobuchwepheshe ezihlangene zokwelapha luye lwabonisa ukuthi i-ultrasound isebenza kakhulu nge-synergetic inhlanganisela namanye ama-ballast izindlela zokuqeda amanzi, njenge-ozone, i-chlorination, i-UV-light, izinga lokushisa noma ukucindezeleka okuphakeme. Ngenxa yokufakwa okulula nezidingo zesikhala esiphansi, imishini ye-ultrasonic iwufanelekile ukuthuthukiswa nokuthuthukiswa kwezinhlelo ze-ballast zamanzi ezangekho okwamanje.
Khuluma nathi mayelana nemvelo yakho yokucubungula! Sizojabula ukukuncoma uhlelo olufanele lwe-ultrasonic ukuze ubuyekeze uhlelo lwakho lwe -board.
Amanzi aseBallast kumele aphethwe yi-disinfected ukugwema ukungeniswa kwezinhlobo ezimbi.
I-Ultrasonic cavitation in liquid
Le vidiyo ikhombisa i-ultrasonic / acoustic cavitation emanzini - ekhiqizwe yi-Hielscher UIP1000. I-Ultrasonic cavitation isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza eziningi ze-liquid.
I-Ultrasonic Cavitation ku-Liquid isebenzisa i-UIP1000
3 x 4kW amandla ultrasound izicelo zokusebenza ezisindayo
I-Mingorance Rodríguez, iMaría del Carmen (2012): I-Ballast Water kanye ne-Strilization yoLwandle lwamanzi. Ku: UDkt. Xiao-Ying Yu (ed.): Ukulahlwa Kokulahlekelwa Kamasipala Nezimboni. InTechOpen 2012. 163-176.
I-Sassi, i-Jukka; Viitasalo, Satu; I-Rytkönen, i-Jorma; I-Leppäkoski, i-Erkki (2005): Ukuhlolwa kokukhanya kwe-ultraviolet, ubuchwepheshe be-ultrasound no-ozone bokuphathwa kokwelashwa kwamanzi e-ballast. I-VTT Amanothi Wokucwaninga 2313. ESPOO 2005.
Viitasalo, Satu; I-Sassi, i-Jukka; I-Rytkönen, i-Jorma; I-Leppäkoski, i-Erkki (2005): I-ozone, i-Ultraviolet Light, i-Ultrasound ne-Hydrogen Peroxide Njengamaphilisi e-Ballast Amanzi - Ukuhlolwa kwe-Mesozooplankton E-Low-Saline Brackish Water. Journal of Engineering Marine Environmental 8 / 2005. 35-55.